भागीरथीको घाँटीमा निलडाम , शरिरको तलको भागको वस्त्र फुकालिएको थियो,… – News Nepali Dainik
भागीरथीको घाँटीमा निलडाम , शरिरको तलको भागको वस्त्र फुकालिएको थियो,…
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७ समय: ७:४९:३०
वैतडीको डोगडाकेदार गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया भागीरथी भट्ट जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिइन् । सधैँ घरमा समयमा आउने भगीरथी त्यो दिन ढिला भइन् । भर्खरै श्रीमान गुमाएकी भगीरथीकी आमाको मनमा सान्नाटा छायो । खै ! छोरी ? साँझको ६ बजिसक्यो । मनमा चिसो पस्यो ।
गाउँघरमा सामान्य रुपमा हुर्केबढेकी छोरी कसैसँग हिडिसकिन् की भन्ने मनमा पलाउनु पाप होइन । नेपाली समाजमा प्रेम विवाहको दर पनि उत्तिकै बढेको छ । तर, भगिरथी त्यो समूहमा पर्दिन थिइन् । उनी प्लस टूमा अकाउन्ट विषय लिएर अध्ययन गर्दै थिइन् । त्यहाँको विद्यालयमा अकाउन्ट पढ्ने भगिरथी मात्रै हुन् ।
भगिरथीलाई नियमित जस्तै थियो होला त्यो दिन । तर, उनी अस्ताउँदै थिइन् के थाहा ? दैवले बुवालाई भर्खरै चुड्यो घरकी साहारा उनै थिइन् । पढेर ठूलो मान्छे बन्ने मनमा रहर भएरै होला उनी अकाउन्ट लिएर पढ्दै थिइन् । त्यो रात भगिरथीका लागि कालो रात बन्यो । कसले, कसरी उनलाई नजर लगाइरहेको थियो, कसरी दाउ कुरिरहेको थियो र कसरी उनले मृत्युवरण गरिन् प्रहरी अनुसन्धानले खुलाउला ।
प्रहरीका अनुसार उनको घाँटीमा निलडाम छ । शरिरको तलको भागको वस्त्र फुकालिएको छ । एक हुर्के बढेकी छोरीलाई भट्टको परिवारले गुमाएको छ । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्त गुमाएजस्तै भगीरथी गुमेकी छन् ।
स्थानीयका अनुसार भगिरथी सरल स्वभावकी थिइन् । कसैको आँखामा नबिझाउने थिइन् । सबैलाई सम्मान गर्थिन् । त्यो दिन उनी करिब आधा किलोमिटरको जंगलमा अस्ताइन् । उनी दौडिन सकेको भए, ईश्वरले उनलाई हेरेको भए जोगिने थिइन् ।
Last Updated on: February 7th, 2021 at 7:49 am